Nantsi indlela i-Samsung engaziphelisa ngayo iingxaki zeGlass yeGreen I-Androidsis
Isamsung yamabhongo kunye nekamva le-Samsung, i Galaxy Fold, I-smartphone yokuqala yenkampani enokusonga, ekugqibeleni yatyhilwa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo emva kokuphuhliswa kweminyaka.
Nangona kunjalo, kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokumiliselwa kwefowuni, inkampani ihlehlise ukuthengisa kweGolden Fold ye-smartphone, isekwe kwingxelo efunyenwe kubasebenzisi bokuqala besixhobo ngokubhekisele kwi iingxaki zescreen. Kodwa i-Samsung sele isebenza ukuyilungisa.
Ngelo xesha, inkampani yayitsho nje Ukuphehlelelwa okutsha kweGolden Fold ye-smartphone eza kubhengezwa kungekudala, Ejonga kakuhle isixhobo. Ngelixa lisithi liyayilungisa imiba, khange lichaze ukuba liceba ukwenza njani oko. (Thelekisa: I-Galaxy Fold vs Huawei Mate X: iikhonsepthi ezimbini ezahlukeneyo zenjongo enye)
Ingxelo entsha evela Yonhap News ithi umenzi uceba ukubeka umaleko wesikrini okhuselayo emzimbeni. Oku kuya kunceda ukukhusela abasebenzisi ekuyicimeni, abanye abasebenzisi abayenzileyo babeyithatha njengesixhobo esigcina isikrini. Ukongeza, wongeza ukuba i-Samsung iya kuthintela izithuba phezulu nasezantsi kwehenjisi ukuthintela ukungcola kungonakalisi iselfowuni esongelayo.
Ngokwezinye iingxelo ezivuzayo, Isamsung ivavanya i-smartphone kwiinethiwekhi zaseKorea. Ingxelo yongeza ukuba i-Samsung kulindeleke ukuba iphehlelele iGolden Fold ngoJuni, kodwa kusafuneka iqinisekisiwe kwaye inkampani inokuwutshintsha umgca wexesha lokumiliselwa.
Ngokumalunga neenkcazo zesikrini, masikhumbule oko I-Galaxy Fold inomboniso we-7.3-intshi Infinity Flex ngesisombululo esigcweleyo se-2,152 x 1,536 pixels. Kule ndlela, ungasebenzisa ii -apps ezintathu ngaxeshanye, into eyi-Samsung eyibiza ngokuba yi 'Three App Multitasking'.
Xa isongelwe kwimowudi yefowuni, inika isikrini esikwi-4.6-intshi ngesisombululo se-FHD se-1,960 x 840 pixels. Iza nenqaku elibizwa ngokuba 'kukuqhubeka kwesicelo', esiguqula ngokuzenzekelayo isicelo xa sitshintsha izikrini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Nantsi indlela i-Samsung enokuthi iphelise ngayo iingxaki zescreen seGlass
Ixesha lesi-7 liza kwi-PUBG Iselfowuni kunye neendevu, iiSeva zoMbindi Mpuma ezinikezelweyo, kunye nokunye